संगीतलाई जीवन र जीवनलाई संगीत मान्नेको लागि – deepesh.com
हिजोआज जो कोहि गायकलाई कस्तो छ भनेर सोध्यो भने उत्तर सबैको उस्तै हुन्छ ‘बेहाल छ, पहिला जस्तो छैन, एल्बम को बिक्रि नै छैन’ पाइरेसीले खत्तम पार्यो । तर यो अवस्था नेपाली संगीत को मात्रै होइन। संसारभरी को संगीत को ब्यापार घटेको छ, टेक्नोलोजीले गर्दा पाइरेसी बढेको छ। पाइरेसी को सबै भन्दा ठुलो समस्या के हो भने , मानिस ले गीत संगीत वा चलचित्र चोरी गर्दा अरु भौतिक समान चोरेको जस्तो आत्मग्लानी नहुनु। पाइरेसी रोक्न धेरै व्यक्ति, संघ संस्था लागि परेका छन्। सफलता निकै टाढा छ तर खुसि को कुरा सन् २०१३ मा बिश्वमा पाइरेसी घटेर कलाकार को आम्दानी बढ्यो (नेपालको हिसाबमा के भयो, कसैलाई थाहा छैन) . पाइरेसी घट्न त्यो संघ संस्था को मेहनतले नभई टेक्नोलोजी को हात छ। यसको बारेमा तल चर्चा गरौला।
नेपालमा एउटा गायक, रचनाकार, संगीतकार, अरेन्जर, बाद्य्बाधक, रेकर्डिस्ट, म्युजिक कम्पनी आदि ले कसरि पैसा कमाउछ ? अरेन्जर, बाद्य्बाधक, रेकर्डिस्ट, स्टुडियो ले गीत रेकर्ड गर्दा, रचनाकार, संगीतकार ले गीतमा आफ्नो काम वापत गायक वा प्रोडुसर संग पैसा लिएर अनि गीत तयार भए पछि म्युजिक कम्पनीलाई बेचेर गायक/प्रोडुसरले पैसा कमाउने गर्छ। गायक/बाद्य्बाधक को हक मा अर्को आम्दानीको बाटो हो स्टेज कार्यक्रमहरु। स्टेज कार्यक्रमहरुमा धेरै जसो गायक/गायिका हरु ले मौका पाउछन, केहि बाद्य्बाधकहरु ले पनि बेला बेला मा मौका पाउछन तर रचनाकार, संगीतकार, अरेन्जर, रेकर्डिस्ट आदि ले स्टेजमा आफ्नो कला देखाउने मौका पाउदैन। हामी आफै पैसा तिरेर रचनाकार ले रचना गरेको, संगीतकार ले संगीत भरेको, अरेन्जर ले संगीत संयोजन गरेको वा रेकर्डिस्ट रेकर्ड गरेको हेर्न जादैनौ। यिनी हरु को जिन्दगी चलाउन गीत रेकर्ड हुनै पर्छ। एल्बमको बिक्रि घटेकोले आजकल पहिला जस्तो एल्बम निकाल्न गायकहरु त्यति मन गर्दैनन्, खाली पैसा खर्च मात्रै किन गर्ने? भन्ने सोच आउन थालेको छ। पहिला वर्षेनी एल्बम निकाल्ने गायक हरु आजकल २-४ वर्षको फरकमा एल्बम निकाल्न थालेका छन्। पहिला एउटा एल्बम मा घटीमा ८ वटा गीत हुन्थ्यो भने आजकल त्यो पनि घटेको छ। खाली स्टेज मा गाउन नया गीत चाहिन्छ भन्ने सोचले मात्रै एल्बम निस्कने क्रम बढ्दो छ।
एउटा कुरा सबैले के बुझ्न जरुरि छ भने कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुनलाई कलाकारले मात्रै पुग्दैन, आयोजक देखि प्राबिधिक सबै को हात हुन्छ। केहि समय अगाडी लण्डनको ठुलो हलमा एउटा नेपाली ब्यान्डले आफ्नो प्रस्तुति दियो। त्यसलाई नेपाली संगीत को सबै भन्दा ठुलो जीत को रुपमा प्रस्तुत गरियो र त्यसको जस त्यहि ब्यान्डले मात्रै पायो। तर यदि त्यो कार्यक्रम असफल भएको भए त्यो ब्याण्डले आयोजक को घाटा बेहोर्थ्यो र ? आयोजकले पनि त ठुलो जोखिम उठाएका थिए त्यसैले त्यो कार्यक्रमको सफलतामा उनीहरु पनि बधाईका पात्र हुन। ब्याण्डको नेताले एउटा अन्तरबार्तामा सबै जस आफैले लिए, आयोजकलाई धन्यबाद जरुरि पनि ठानेनन्।
नेपालमा कपिराइट को ठुला ठुला कुरा हुन्छन तर कलाकारले केहि पाउदैन। केहि रेडियो अनि टिवी ले दिने रोयल्टी आफु खुशी दिएका हुन्। तर खुसीको कुरा के भने अधिकांश साइट हरु अमेरिकामा होस्ट भएका छन् , तिनलाई अमेरिकाको कानुन लाग्छ, अधिकांश साइट गुगलको बिज्ञापनमा भर पर्छन र गुगल प्रतिलिपि अधिकार को कुरामा धेरै नै सचेत छ। मेरो भनाइ को तात्पर्य के भने यदि कलाकारले साचिकै चाहने हो भने यी सबै साइट हरु बाट आफ्नो गीत हटाउन सकिन्छ। केहि कलाकारहरु आफनो गीतहरु विभिन्न साइटहरुमा देख्दा मक्ख पर्छन। यदि तपाई शोखको लागि पनि गाउनु / बजाउनु हुन्छ भने त ठिकै छ नत्र त्यो आफनै मुतको न्यानोमा रमाएको जस्तो मात्रै हो।
सन् २००२ तिर हामीले एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौ। त्यति खेर दक्षिण एशियामा मात्रै ४ करोड थिए नेपालीभाषीहरु , अहिले त नेपालको जनसंख्यानै ३ करोड छ, भने संसार भरि नेपाली भाषा बोल्ने ५ करोड त होलान। ५ करोड मानिस मा १-२ लाख क्यासेट/cd बेचेर कहिले सम्म दङ्ग पर्ने ? आजकल त ८-१० हजार cd बेच्न पनि गार्हो छ। इन्टरनेट ले संसार सानो बनाई सक्यो, पहिला जस्तो क्यासेट नै सबै तिर पुर्याउनु पर्दैन। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट कसरि जोड्ने त्यो सोच्नुस, त्यसको एउटा मात्रै उपाय हो ‘राम्रो गीत’, मेहनत गर्नुस नौलो प्रयोग गर्नुस, नया नया बिषय मा अनुसन्धान गर्नुस। भएको छोडेर नभएको नखोज्नुस, नेपालीभाषी लाई मात्रै होइन अरुलाई पनि कसरि आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यो सोच्नुस। यहाँ मलाई मेरा मित्र दिपक बज्राचार्य सम्झना मनलाग्यो। उनको नया प्रयोगलाई नमन गर्न मन लाग्यो। उनले नयापन दिएका छन् तर नया बाट होइन हाम्रो आफनै पुरानो बिर्सन लागेको बाजा गाजा बाट। उनको यो प्रयाश सफल होस् नेपाली मात्रै होइन पुरा बिश्वनै नाचोस उनको संगीत मा। दिपकले गरेको यो दुख बाट दिपक उनको टिमलाइ फाइदा होस्, अरुले उनको दुखमा मोज नगरोस।
त्यो भन्दा पहिला मैले माथि भनेको थिए नि कि सन् २०१३ मा पाइरेसी घट्यो ? हो सहि हो? तर पैसा तिरेर गीत किन्ने मानिस को भिड बढेर होइन , आजकल online radio खुब चलेको छ। Rdio, Pandora, Jango, last.fm, google play music, spotify आदि यस्ता रेडियो मा गीत बज्दा कलाकार ले रोयल्टी पाउछ, डलर मा धेरै त हुदैन तर नेपाली रुपैया मा निकै हुन्छ। यस्तो रेडियो को सफलता देखेर microsoft, samsung, sony, nokia, apple जस्ता ठुला ठुला कम्पनि ले पनि यस्ता सेवा हरु सुरु गरेका छन्। मानिसहरु ले आफुले चाहेको गीत चाहेको समयमा गीत सुन्न पाएकोले पाइरेसी घटेको। न चोरीकनै गीत सुन्न पाए पछि किन्न चोर्न पर्यो होइन र ?
youtube मा account बनाउन खासै गार्हो छैन। जो कोहि ले गूगल account बनाउन सक्छन, त्यो पनि सित्तैमा। आजकल नेपाल बाट पनि तपाइले video हाल्दा monitize गर्ने option दिन्छ। त्यो monotization on गर्नु भयो र गूगलको २-४ वटा नियम पुर्याउनु भए video को रोयल्टी तपाइले पाउन थाल्नु हुन्छ। हरेक चोटी कसैले video हेर्दा त्यसमा भएको बिज्ञापनको आम्दानी youtube ले तपाई संग बाड्छ। तर अर्को तरिका पनि छ जुन यो भन्दा कलाकारको लागि उत्तम हुन्छ। त्यो हो Youtube partner . नेपाली कार्यक्रम गरेर youtube को पार्टनर बन्ने भाग्यमानी म नै हुः। पहिले पहिले youtube को पार्टनर बन्न निम्नतम views, कमेन्ट, subscribers चाहिन्थ्यो तर आजकल दुई चार वटा देश बासी केहि नगरी त्यसै बन्न सक्छन। तपाइको साथी, आफन्त, चिनेजानेको हरु कोइ न कोइ त अमेरिका, यु के , अस्ट्रेलिया आदि मा होलान नि,उनीहरुलाइ उनीहरुको ठेगाना राखेर account खोल्न लगाउनु भए हुन्छ, कोहि छैन भने म छदै छु। ति देश हरु बाट account खोले पछि youtube पार्टनर बन्न २-४ क्लिक को कुरा मात्रै हो। subscribers हरु कसरि बढाउने त्यसको बारे मा कुनै दिन संगै बसेर कुरा गरौला।
facebook पेज छ भने त्यसमा युजर /लाइक बढाउन तिर लाग्नुस्। यस्तो कुरा हरु हाल्नुस जुन अरु कतै बाट नपाइयोस। त्यो दिन टाढा छैन जुन दिन facebook ले तपाइको पेजमा बिज्ञापन देखाएर कमाएको पैसा तपाई संग बाढ्ने छ।
digital presence बढाउन तिर लाग्नुस् youtube, facebook, twitter, instagram, google plus आदि सबै मा आफ्नो एउटा युजरनेम राख्नुस।
राम्रो गीत/संगीत/video बनाउने तर्फ ध्यान दिनुस ताकी सबै ले share गरुन। बिर्सन नहुने एउटा कुरा के हो भने बिश्व साघुरो भै सक्यो, भाषाको बाँधले मिठो संगीतको खोलालाई बाँधेर रोकी राख्न सक्दैन। अब तपाइको गीत नेपाली स्रोताले मात्रै नभई बिश्वले सुन्नेछ।
तपाइले सोच्दै हुनु हुन्छ होला कि मैले यी कुरा हरु किन लेखे ? एउटा कलाकारले खान नपाए मलाई के को टन्टा ? तर मेरो पनि स्वार्थ पक्कै छ र यो स्वार्थ मेरो मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली गीत संगीत अनि कलाकारलाइ माया गर्ने हरु को स्वार्थ हो। तपाई आफै विचार गर्नुस यदि एउटा कलाकारले दिन भर परिवार कसरि पाल्ने, यस्तो महंगीमा कसरि गुजारा चलाउने भनेर सोची रहन्छ भने उसले फुर्सद निकालेर गरेको सिर्जना कस्तो होला? र यदि पैसा को पिर नगरी संधै नया नया गीत संगीत को खोजीमा अनि नया नया सिर्जना मा समय बिताउन पाए कस्तो गीत संगीत आउला ? राम्रो राम्रो नेपाली गीत संगीत सुन्ने रहर कुन चाही नेपाली मा नहोला ? कुन चाही नेपालीले हाम्रो गीत संगीतले बिश्व बजार मा अधिपत्य जमाएको हेर्न नचाहेको होला ? तपाइलाई कहिँ कतै अप्ठ्यारो परे म यहाँ संधै हुनेछु। र अन्तमा तपाइको संगीतको मार्ग बाट बिश्व विजय गर्ने यात्रालाई ३ करोड नेपाली को शुभकामना।
Tagged: digital rights internet nepal nepali music piracy